လူသစ်များအတွက် Hive Platform ( Henry Aung ) — Hive
လူသစ်များအတွက် Hive Platform ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ ။ ဤစာစုသည် Hive platform ပေါ်သို့ ဝင်ရောက်လာသော လူသစ်များ အတွက်သာ ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်ပါသည်။ Hive platform ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာသော လူသစ်များ အတွက် အရေးကြီးဆုံးမှာ အခြားသူများ မိမိ အကောင့်အား အသိအမှတ်ပြုရေး ဖြစ်ပါသည်။
ဤ အခြေအနေမျိုးမှာ Social Media ဖြစ် သော Facebook / Tweeter/ Instagram အစရှိသော နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက်ပို၍ အသိအမှတ်ပြုခံရပါသည်။
Social Media ဖြစ်သည့် အတိုင်း အရေးအသားလည်း ကောင်းမည် ပုံများလည်း ဝေဝေဆာဆာရှိမည်ဆိုလျင် သေချာပေါက် အသိအမှတ်ပြုခံရပါလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင် မိတ်ဆွေများက မေးစရာရှိလာပါသည်။
ယောကျ်ားလေးများ အတွက်ကော အသိအမှတ်ပြုစရာ မရှိပြီလော..? ဟုတ်ကဲ့။ ပိုင်တံခွန် ကဲ့သို့ ဆိုလျင်တော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါ။ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ပိုင်တခွန်ကဲ့သို့ ဖြစ်ရန် ကြိုးစားကြပါကုန်။ ရှိစေတော့။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် လူသစ် မိတ်ဆွေများ အတွက် တခု သတိပေးလိုသည်မှာ မိမိသည် မည်သည့် နေရာတွင် ဝါသနာပါသည် / အစားအသောက် / ပန်းချီ / ဓါတ်ပုံ စသည်ဖြင့် မိမိ နှစ်သက်ရာ ဝါသနာပါရာ Community သို့ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းပါ။
မိမိ သဘောကျရာ Post များတွင် Comment ပေးရန် ဝန်မလေးပါနှင့်။ ထို့အတူ မိမိသဘောကျသော account များ အား Follow လုပ်ရန် ဝန်မလေးပါနှင့်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ မိမိ Post အား Comment ပေးလာသူတို့အား တလေးတစား ပြန်ကြားရန်မှာ အလွန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိကလည်း အခြားသူငှာများ ၏ Post တွင် Comment ပေးခြင်းဖြင့် မိမိအား လူသိပိုများလာစေပါလိမ့်မည်။ ဤ တွင် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် အကြံပေးလိုသည်မှာ Hive Myanmar တွင် မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားနေခြင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
သို့သော် မိမိသည် English စာ ကောင်းမွန်ပါက အခြားသော Community များတွင် အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် Post တင်ခြင်းဖြင့် အခြားသူများ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရယူထားစေချင်ပါသည်။ မိမိက ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် ဝါသနာပါ ပါက D.Buzz သည် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ယခင်က Steemit တွင် မကလျာ အမည်ရှိ အမျိုးသမီးက အစားအသောက်များ ကိုယ်တိုင် စီမံချက်ပြုတ်ကာ Post တင်ခဲ့ဘူးပါသည်။ ယခု Hive Myanmar တွင် ထိုကဲ့သို့သော Foodie tag တွဲနိုင်သည့် Post များ မတွေ့ရသေးပါ။
ရသပိုင်းတွင် မမကြည် / မစုလှိုင် အစရှိသော အမျိုးသမီး အကောင့်ပိုင်ရှင်များ နာမည်ကြီးခဲ့ပါသည်။အချုပ်ဆိုရလျင် လူသစ်များ ဖြစ်သော မိတ်ဆွေများ အနေဖြင့် မိမိတို့ post ရှိ Comment များအား အတတ်နိုင်ဆုံး Reply ပြန်ရန် ... မိမိသဘောကျသော အကောင့် ပိုင်ရှင်များအား Follow လုပ်ထားရန် နှင့် သူ၏ Post များအား ကော်မန့်ပေး၍ မိမိအား အသိအမှတ်ပြုစေရန်ကြိုးစားပါ။
ဤသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိ၏ HP နှင့် RC အား အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းပါ။ မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် မိမိတွင် HP / RC မည်မျှ ကျန်သေးကြောင်း မသိလျင် ပုံတွင် ကျွန်တော် ပြထားသကဲ့သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေအနေဖြင့် မိမိ HP အား ၂၄ နာရီ အတွင် ပြန်ပြည့်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းချုပ်ရန်လိုပါလိမ့်မည်။ မိမိတွင် HP 500 ခန့် ရှိလာလျင်တော့ သင့် အနေဖြင့် Hive platform တွင် လွတ်လပ်စွာ လက်ပစ်ကူးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး အနေဖြင့် သတိပေးလိုသည်မှာ Hive platform သည် Hive power တခုတည်းဖြင့် ပြီးမသွားပါ။ မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် အခြားသော hive Engine token များအားလေ့လာရန်ကျန်ပါသေးသည်။ ဤအရာအားလုံးသည် မမြင်ရသော ပိုက်ဆံများ ဖြစ်ကြပါသည်။
နှောင်အလျင်သင့်လျင် Hive Engine token များ မည်သို့ တန်ဖိုးရှိကြောင်း ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ မြန်မာလူငယ်များ Hive platform တွင် အဆင်ပြေကြပါစေ။
16/09/2021 - Thursday - 20;20 Pm
#myanmar #hive #sharing #leo #proofofbrain #archon #neoxian #aeneas #creativecoin
ခွန်အားဖြည့်စာလေးတွေ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါအကို
asterkame (63) last month
အစ်ကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားလျက်ပါညီမရေ... !PIZZA
nweoomon (54) last month
Dbuzz မှာ ပုံတင်တတ်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်။ မြန်မာစာနဲ့ရေးဖို့ အားပေးလို့ အားရှိရပါတယ်။
မြန်မာစာ ရေးသားသူများကိုတော့ အထူးအားပေးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများလည်း အင်မတန် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ D.Buzz တွင် အောင်မြင်ပါစေ။ !PIZZA
uthantzin (59) last month
ဟုတ်ပါတယ် Hive platform ပေါ်တွင် လေ့လာစရာများ အများအပြားရှိနေပါ၍ အချိန်တိုင်း လေ့လာကြိုးစားကြရပါမည်။ ကောင်းမွန်သော post လေးပါ။ !PIZZA
ashinn (51) last month
HPနှင့် RC ကိုထိန်းသုံးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပဲရှင့်
@ashinn! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
viviankay00 (56) last month
Hive engine က token တွေ အကြောင်းတော့လိုက်လေ့လာနေတယ်ရှင့်။
@viviankay00! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.
htwegyi (64) last month
အမျိုးသမီးထုကြီးအတွက် ကံကောင်း အားထားဖွယ်ရာ
Hive crypto ကြီးပါနော်။ ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိဘူး
ရေးကြည့်မှ ပြေးကြည့်တာထက် $တွေမြင်ရမှာ။
ဦးထွေးလည်း ပိုင်တံခွန်လိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တော့။ !PIZZA
yuzana (60) last month
အဓိကကတော့ မြန်မာစာမရေးတပ်တာမဟုပ် နမော်နမဲ့နိုင်တပ်တာလို့ဆိုရမလားဘဲ၊
ကျွန်တော်လည်း သတ်ပုံမှန်အောင်ကြိုးစားရေးနေရတာ ဦးယု ရေ... !PIZZA
@yuzana! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.